चलचित्र "छक्का पन्जा" समिक्षा | Hamro Patro
चलचित्र "छक्का पन्जा" समिक्षा यो कथा हो एउटा अछामी राजाको
२०७३ सालकै वहुप्रतिक्षित चलचित्र छक्कापञ्जा आजबाट देशभरिका थुप्रै चलचित्र घरहरुमा प्रदर्शनमा आएको छ । टेलिसिरियलका चर्चित हाँस्य अनुहारहरुले निर्माण गरेको यो चलचित्र एउटा सामाजिक पृष्ठभुमीमा आधारित कथानक चलचित्र हो जसलाई परिवारसंग निर्धक्क रुपले हेर्न जान सकिन्छ । ६ अकंसंग बढिनै आत्मियता भएका दिपक राज गिरिको पहिलो प्रस्तुती ६ एकान ६, दोश्रो वडा नं ६ अनि तेश्रो छक्का पञ्जा हो । आउनुहोस दिपा श्रि निरौलाले निर्देशन गर्नुभएको यो चलचित्रको समिक्षा गरौ ।
एउटा औसत नेपाली गाउँ अनि त्यहाँका वासिन्दाहरुको कथा हो, छक्का पञ्जा । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको कथा जहाँ मलेसिया जानेदेखि अष्ट्रेलिया र अमेरिकाजानेसम्मको कथा हो छक्का पञ्जा । अछामी राजा अनि उन्का वेरोजगार गाउलेसाथीहरुको केमिष्टी्र हो यो चलचित्र जसमा कथाले काठमाण्डौसम्म घुमाउन ल्याउँदछ । सम्पूर्ण रुपमा नेपालीजनको कथा अनि ब्यथा समातेको यो चलचित्रले यूवाहरुको विदेशप्रेम अनि वैदेशिक रोजगारीले देखाएको समाजका खराब पाटाहरु केलाएको छ । राजा हुन दिपक राज गिरि जो अछामे टोनमै बोल्दछन, उनका साथीहरु जितु नेपाल एउटा पण्डितका पण्डित छोरा हुन् । बुद्धि तामाङ्ग विवाहित अधवैंसे हुन भने माग्ने बुढा अर्थात् केदार घिमिरे आफ्ना बुढीआमाका एकमात्र साहारा हुन् । दिपक राज गीरि राजा मनका अच्छा मान्छे त हुन तर उनका अब्यवहारीक आदर्श र अरुहरुसँग छक्का पञ्जा गर्ने बानी र समयले उनिमाथीनै गरेको छक्का पञ्जा हो यो चलचित्र र विवाह नगरिकन अनि मेहेनत नगरिकन आनन्दको जीवन बिताउने केटाहरुको जीवनमा आएको परिवर्तन र परिवेश हो, छक्कापञ्जा ।
चलचित्रको संवादनै यसको गहना हो, ठेट घटना र हास्यप्रधान संवादहरुले चलचित्रलाई हेरुन्जेलसम्म रमाइलो बनाएको छ ।
1) अल्कोहल अर्थात अल समस्याको हल भएकाले अल्कोहल भएको कुरा
2) तिम्रो खोकीले अरुभन्दापनि चोर चाही आउँदैन भन्ने डाइलग
3) कानको दुइटा काम हुन्छ कि न समाचार सुन्न कि त चश्मा अड्याउने
4) खसीले दुइटै गर्दैन त्यहि भएर खसीको कानको के काम ?
धेरै पञ्च लाइनले बनाएको यो चलचित्र संवादको हिसाबले उत्कृष्ट छ । प्रथम हाल्फमा राम्रो र लोभलाग्दो चलचित्र विस्तारै दोश्रो हाल्फमा चिप्लिन थाल्छ । प्रथम हाल्फमा वहुतै राम्रो किकस्टार्ट गरेको चलचित्र दोश्रो हाल्फमा नचाहिने र कन्भिन्सनै नहुने सामाजिक फिक्शनतर्फ अगाडि बढ्दछ । प्रियकां कार्कीको रोल शुरुमा दमदार देखिएपनि पछिको उनको उपस्थितीलाई कथाले न्याय दिनसकेको छैन । सरल सुकुमार अनि महिलावादी प्रियंका आखिर किन अर्कैसँग गइन र कोही अरुको बदलाकालागि किन उनि त्यतिसम्म होमिइन ? बिचमा धेरै कन्भिन्स नहुने परिघटनाहरु छन् जुन हेर्नलाई तपाई आफै जान जरुरी छ । चलचित्र एउटा खुशी अनि सुखद अन्तमा सकिन्छ । अगाडिको चलचित्र वडा नम्बर ६ को तुलनामा कथामा खासै दम चाँही छैन तर हँसाउन रुवाउन अनि नेपाली ग्रामीण परिवेश देखाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।
पुरूषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन उत्कृष्ट छ र कला निर्देशन पक्षपनि एकदमै राम्रो छ । ब्याक ग्राउन्ड संगीतमा सुजिल कर्माचार्यले राम्रो गरेका छन भने अल्मोडा राणा उप्रेतीको गीत एरेञ्जमेन्ट राम्रो छ । जम्मा दुइवटा गीत भएपनि दुबै गीत एकदमै उत्कृष्ट छन, गीत संगीतमा दिपक शर्माले राम्रो गरेका छन् । कोरियोग्राफि उत्कृष्ट छ र एडिटिंग पनि राम्रो छ ।
दिपक राज गिरिलाई राजाको रुपमा सुहाएको छ र पहिलेका चलचित्रको तुलनामा उनको यो राजा पात्रले गरेको अभिनय धेरै राम्रो छ, विशेषत अछामी लवजमा उनको अभिनय जिवन्त छ । केदार घिमीरे चमत्कारी हाँस्य कलाकार हुन जो स्क्रिनमा हुँदा हाँसो नउठ्ने सवाल नै छैन र यस चलचित्रमा उनी उत्कृष्ट र हास्य भूमिकामैं आउँछन । दाश्रो हाफमा उनि निकैबेर स्क्रिनमा देखा नपर्दा दर्शकहरुलाई खल्लो लाग्न सक्छ । जितु नेपालको कामपनि उत्कृष्ट छ भने वुद्धि तामाङ्गको कामपनि राम्रो छ तर उनको हैट फर्मूला अबभने दर्शकलाई नौलो लाग्दैन, आफ्नो पुरानो अभिनयको धारालाई उनले परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शिवहरि पौडेललाई कथाले उत्ति ठाउँ दिएको छैन तथापि पाएजति ठाउँमा उनले राम्रो गरेका छन् । बाँकि प्रियंका कार्की, नम्रता सापकोटा र वर्षा राउतको काम पनि उत्कृष्ट छ । खासगरि नम्रता सापकोटाले भर्खरै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ब्रासलेटबाट पनि खुबै तारिफ बटुलेकि छिन । त्यस बाहेक चलचित्रमा हाँस्य टेलिसिरियलमा देखिने प्राय सबै कलाकारको उपस्थिती रहेको छ र आर्यन सिग्देलको विशेष प्रस्तुती अलिक खलनायकी हिसाबको भएकाले सबैलाई उनको त्यो Surprise प्रस्तुती कत्तिको मन पर्ने हो, त्यो अाउँदो दिनले बताउँछ ।
आफ्नो डेब्यू चलचित्र छक्कापञ्जामा दिपा श्री निरौलाले तारिफ योग्य काम गरेकि छिन, कमजोर कथाले उनको चलचित्रलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन नसकेपनि आफ्नो सहकर्मी साथीहरुसंग मिलेर एउटा मनोरञ्जनले भरिपुर चलचित्र दिएकी छिन । उनिपनि अतिथि भूमिकामा चलचित्रमा देखापर्छिन र माग्ने बुढा र उनको बिचको त्यो दृश्य मिठासले भरिपूर्ण छ । कथामा अलिकति ध्यान दिएको भए उनको यो निर्देशन अझ अब्बल र एतिहासिक हुने थियो तर जस्तो होस उनले एउटा रमाइलो चलचित्र बनाएकि छिन ।
रमाइलो पहिलो हाफ तर वहकिएको दोश्रो हाफ, छक्का पञ्जाको दुइघन्टा मनोरञ्जनले भरपुर त छ यद्धपी दर्शकलाई फिल्ममा केही अपुग जस्तो भने लागिरहन्छ । दोश्रो हाफमा भडकिएको कथा र लोकप्रिय कलाकार माग्ने वुढोलाई स्क्रिनवाट निकैवेर पर राख्नुमै खोट देखिन्छ जसलेगर्दा यो चलचित्र यहि टिमले बनाएको वडा नं ६ जस्तो उत्कृष्ट चाँही हुन सक्दैन ।
हामी यो चलचित्रलाई ५ अकंमा ३.५ अकं दिन्छौ ।